समाचार - टिजियाको ठूलो डाटा बाट पहिलो घरका ब्रांडहरू देख्न प्रयोग गर्नेहरूको मन
हालका वर्षहरुमा, चीनको उत्खनन उत्पादन मा एक प्रस्फुटन बृद्धि भएको छ, र बजार शेयर को लागी लडाई शुरू भैसकेको छ। चीन निर्माण मेशीनरी उद्योग संघको उत्खनन बिक्री तथ्या .्क अनुसार २०१२ मा घरेलु उत्खनन ब्रान्डको बजार हिस्सा 62२.२% सम्म पुगेको छ, जबकि जापानी, यूरोपीय, अमेरिकी र कोरियाली ब्रान्ड क्रमशः ११.7%, १ 15..7% र १०..4% रहेको थियो। यो देख्न सकिन्छ कि उत्पादनको कारणले स्तरको सुधार, बिक्री पश्चात सेवा प्रणालीको सुधार, र अधिमान्य बिक्री नीतिका कारण घरेलु ब्रान्ड बढेको छ र अधिकांश प्रयोगकर्ताहरूको छनौट भएको छ।
त्यसो भए देशी ब्रान्डको बजार सेयरको आकृति के हो?
संघको तथ्या .्कका अनुसार सन् २०१ in मा स्यान, जुगुong्ग, लियुong्ग, र शेन्डong लिंगोongको बजार शेयर क्रमशः २.0.०4%, १ 14.०3%, .3..3%%, .5..5% र .1.१5% थियो। तथ्या point्क दृष्टिकोणबाट, सान्याले उत्खनन बजारको एक चौथाई ओगटेको छ, र बिक्री विश्लेषण निस्सन्देह घरेलू बजारमा सबै भन्दा ठूलो विजेता हो, त्यसपछि XCMG र Liugong जस्ता ब्रान्डहरू पछ्याउँदछन्। जनवरी देखि जून २०२० सम्म, सान्या र एक्ससीएमजी अझै पनि घरेलू उत्खननको बिक्रीमा शीर्ष दुई छन्। यो उल्लेखनीय छ कि Zoomlion को पनि विकासको एक मजबूत गति प्राप्त भयो। जूनको बिक्री मात्रा घरेलू ब्रान्डको बीचमा पाँचौं स्थानमा छ।
अन्त प्रयोगकर्ताहरूबाट घरेलु उत्खनन ब्रान्डको श्रेणीकरण हेर्दै
त्यसो भए, के मार्केट सेयरले प्रयोगकर्ताहरूको दिमागमा ब्राण्डको पहिचान प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ? यस उद्देश्यका लागि, टिजिया फोरमले हालसालै "डोमेस्टिक एक्भ्यावेटर ब्रान्ड रैंकिंग" को एक सर्वेक्षण सुरू गर्‍यो, र करीव १०० अन्त्य प्रयोगकर्ताहरूले भाग लिए र आफ्नो राय व्यक्त गरे। फोरम ए मा प्रयोगकर्ता सर्वेक्षण
सर्वेक्षण परिणामहरूले देखाउँदछ कि करीव %०% प्रयोगकर्ताले सान्यालाई पहिलो घरेलु खुदाई ब्रान्डको रूपमा दर्जा दिन्छ, जसले देखाउँदछ कि यसको बिक्री मात्रा यसको नामको योग्य छ। सान्या, लियुong्ग, जुगुong, र शेन्डong लिंगong उच्च प्रयोगकर्ताको ध्यानका साथ शीर्ष चार ब्रान्डहरू हुन्। 90 ०% भन्दा बढि प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूलाई शीर्ष चारमा दर्जा दिन्छन्, जुन मूल रूपमा बजार सेयर डाटासँग अनुकूल छ।
कसरी टोन्नेज प्रयोगकर्ताहरूले घरेलु ब्रान्डहरूमा ध्यान दिन्छन् भनेर विचार गर्दै
बिभिन्न ब्रान्डका बिभिन्न उत्पादन सुविधाहरू छन्। त्यसो भए, साना, मध्यम र ठूलाको विभिन्न टन्नजको अनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले घरेलु ब्रान्डलाई कति ध्यान दिन्छन्?
टिजिया उत्पाद पुस्तकालय डेटा मुख्य रूपले प्रयोगकर्ताहरू द्वारा बनाइएको खोजीहरूको संख्याबाट आउँछ। यो देख्न सकिन्छ कि सेन्या, Xugong, Liugong, Shandong Lingong र अन्य ब्रान्ड प्रयोगकर्ताहरु को बीच मा परिचित छन्, प्रयोगकर्ताहरु नयाँ उपकरणको खरीद गर्दा प्रासंगिक उपकरण प्यारामिटरको खोजी गर्न प्राथमिकता दिनेछ, र अन्तिम खरीद निर्णय-प्रतिक्रिया हो। बजार शेयरमा पनि लगातार:
१. क्रमश: साना, मध्यम र ठूला उत्खननकर्ताहरूतर्फ प्रयोगकर्ताको ध्यान हेरेर, SANY अग्रणी छ, एक पटक फेरि यसको घरेलू अग्रणी स्थिति पुष्टि गर्दै;
२. साना उत्खननकर्ताहरूमा प्रयोगकर्ताको ध्यान उत्खननको डिग्री मध्यम र ठूला उत्खननहरूको भन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यो निर्माण आवश्यकताहरू जस्तै वृद्ध समुदायको रूपान्तरण, ग्रामीण पुनरुद्धार रणनीति, भूमि परिसंचरण र बगैंचा रोपण, र सानो उत्खननका फाइदाहरू जस्तै साना र लचिलो, बलियो पासभरी, र श्रम लागत बढेको कारण ठूलो वृद्धिको कारण हो। यसले साना खन्नको लागि बजारको मागलाई पनि तीव्र बनाएको छ।
संरक्षण दरबाट विभिन्न टन्नेजमा प्रयोगकर्ताको ध्यानको बदलिएको प्रवृत्तिलाई हेर्दै
संरक्षण दर ब्रान्ड मूल्य मूल्यांकन गर्न को एक महत्वपूर्ण कारक हो। प्रयोगकर्ताको दोस्रो मोबाइल फोनमा ध्यान प्रत्यक्ष रूपमा ब्रान्ड संरक्षण दर झल्काउन सक्छ। हामी चार घरेलू ब्रान्डहरू सेनिय, जुगु ,्ग, लियुong्ग, र शेन्डong लिंगong छान्छौं जुन प्रयोगकर्ताहरूले ध्यान दिए। दोस्रो मोबाइल फोनको परिप्रेक्ष्यमा, हामी प्रयोगकर्ताको ध्यान विभिन्न टन्नेज उत्खननकर्ता र उनीहरूको परिवर्तन भइरहेको प्रवृत्तिमा हेर्छौं:
दोस्रो मोबाइल फोनको तथ्या .्कका अनुसार नयाँ मेशिनहरूको ध्यान उस्तै छ, र साना खन्नको लागि प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान मध्यम खुदाई र ठूलो खुदाई भन्दा बढी छ, र यसले गत बर्षको लागि स्थिर ढाँचा कायम राखेको छ। डिसेम्बर २०१ to देखि फेब्रुअरी २०२० सम्म, चिनियाँ नयाँ वर्षको प्रभाव र महामारीको निलम्बनका कारण, विभिन्न टन्नेजको उत्खनन गर्नेतर्फ प्रयोगकर्ताहरूको ध्यान अस्वीकार भएको छ। ती मध्ये, साना उत्खननकर्ताहरूको डेटा एकदम घटेको छ। मार्चदेखि अप्रिलसम्मको काम पुनः सुरुबाट प्रभावित, ध्यान छोडियो। महत्वपूर्ण पलटाव, मे पछि थोरै गिरावट सामान्य भएको छ, र समग्रमा यो गत बर्षको स्तर भन्दा अलि बढी छ।
यो प्रवृत्ति विशेष गरी Sany को डाटा मा स्पष्ट छ, जो बजार मा उपकरणको ठूलो संख्या र डाटा को ठूलो निरपेक्ष मूल्य सम्बन्धित छ।